COVID-19: Ahoana no hisorohana ny Coronavirus - Rebates ara-pahasalamana
Home » Blog » COVID-19: Ahoana no hisorohana ny Coronavirus
Ny coronavirus, nohafohezina hoe Cov, dia viriosy marobe izay mety hamindra ny biby sy ny olombelona. Amin'ny olombelona, ​​izy ireo dia afaka mamokatra karazana aretin'ny taovam-pisefoana, manomboka amin'ny sery mahazatra ka hatramin'ny pnemonia mafy (aretin'ny havokavoka). Ny ankamaroan'ireto virus ireto dia tsy manafika ary misy fitsaboana azo atao. Mbola betsaka kokoa aza, ny ankamaroan'ny olona dia voan'ny karazana coronavirus amin'ny fiainany, matetika nandritra ny fahazazany. Na dia matetika kokoa aza izy ireo amin'ny vanim-potoana mangatsiaka kokoa, toy ny fararano sy ririnina, azonao atao ny misambotra azy ireo amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona. Coronaviruses dia nantsoina ho an'ny spikes toy ny satro-boninahitra eny amboniny. Coronaviruses dia manana vondrona sokajy 4 lehibe fantatra amin'ny anarana hoe alpha, beta, gamma, ary delta.
Tao anatin'ny roapolo taona lasa izay, ny coronavirus dia niteraka valanaretina telo izay misy:
SARS (Sindrom-pisefoana mahery setra): aretina marobe amin'ny taovam-pisefoana izay nanomboka tany Sina tamin'ny 2002 ary niely eran'izao tontolo izao, nahatratra olona 8000 ka nahafaty olona 700 teo ho eo. Tsy nisy raharaha SARS-CoV voarakitra hatramin'ny 2004.
MERS (Syndrome fitempon'ny faritra atsinanana): ny tranga voalohany momba ny MERS-CoV dia noraketina tao Arabia Saodita tamin'ny taona 2012, ka niteraka tranga 2400 ary 800 no maty. Ity tranga farany ity dia niseho tamin'ny volana septambra 2019.
COVID-19 (aretina Coronavirus 2019): Ny tranga voalohany dia naseho tany Chine tamin'ny faran'ny taona 2019. Ankehitriny, tranga miisa 117,000 no notaterina ary narotsak'izy ireo 4257 ny maty. Ny World Health Organisation (WHO) sy ny Fanaraha-maso ny aretina (CDC) dia mametraka protocols fiarovana be sy ny fisorohana.
Ny coronavirus novelom-baovaon'ny COVID-19 dia aretina taovam-pisefoana miainga amin'ny hatsiaka mahazatra mahazatra mankany amin'ny pnemonia miharan'ny fiainana. Tany Wuhan, China no nitantarana voalohany azy tamin'ny Desambra 2019 tamin'ny fivoahana ary niparitaka nanerana an'izao tontolo izao.
Heverina fa avy amin'ny loharanom-biby ny fiandohan'io coronavirus io. Ny fanadihadiana sasany dia mampiseho fa avy amin'ny bibilava, ary ny hafa kosa milaza fa avy amin'ny ramanavy izy ireo. Na izany na tsy izany, nafindra tamin'ny olona izany. Afaka mamindra ny otrik'aretina ho an'ny hafa amin'ny alàlan'ny rano mirefy 6 metatra ny olona. Mety ho voan'ny aretina koa ianao raha mikasika ny mason-doza izay voapoizina amin'ny tsiran'ny vatana misy olona voan'ny aretina (ny tsiranoka, ny fitrandrahana, ary ny sisa).
Izy io dia aretina taovam-pisefoana aretin'ny taovam-pisefoana izay miteraka ireto soritr'aretina manaraka ireto: ny tazo, ny kohaka, ny fihinan-kanina, ny fitrandrahana orona, ny aretin'andoha, ny havizanana, ny tsy fahazoana aina ary ny fofon'aina. Ny soritr'aretiny dia mety ho malefaka, antonony na mafy. Raha tsy tsaboina tsara dia mety hitarika ho an'ny aretim-pozobe, ny tsy fahampiana multiorgan ary ny fahafatesany.
Ny fisorohana Coronavirus
Mandraka androany dia tsy nisy vaksiny noforonina hisorohana ny COVID-19. Ny fomba tsara indrindra hisorohana ny aretina dia ny fisorohana ny aretina. Jereo ity horonantsary manan-danja ity hianatra bebe kokoa momba ny fomba hisorohana ny fandehanana mandritra ny aretin'ny valanaretina.
Ho fanampin'ny fijerena ilay horonan-tsary, ho azo antoka fa manaraka ireo toro-làlana ireo amin'ny CDC. Ny CDC dia nanoro hevitra ireto manaraka ireto ho fepetra fiarovana isan'andro mba hisorohana ny fihanaky ity aretina ity:
Mialà amin'ny fifandraisana akaiky amin'ny marary.
Aza esorina ny masonao sy ny oronao ary ny vavanao.
Mijanona ao an-trano raha marary ianao ary mampiasa saron-tava mba hisorohana bebe kokoa amin'ny hafa.
Sarony amin'ny orona azo itolahana ny oronao sy ny vavanao rehefa mikohaka na mihetsiketsika ary atsipazo ao anaty fako. Azonao atao ny mandrakotra ny vavanao amin'ny sela raha tsy manana fehezana izy.
Sasao tsy tapaka amin'ny rano sy savony mandritra ny 20 segondra farafahakeliny ny tananao, indrindra rehefa avy mandeha any amin'ny efitrano fandroana, alohan'ny hisakafoanana, ary aorian'ny fisotroana na mifoka. Raha tsy manana rano sy savony ianao amin'izao fotoana izao, dia azonao atao ny mampiasa sanitera tanana izay ambany indrindra amin'ny 60%. Tsy maintsy manasa tanana foana ianao, raha maloto.
Manadio sy manala otrikaina sy tany tsy voakitika tato ho ato. Afaka mampiasa ratra mitondra bibikely fanosotra na lamba famafazana misy rano sy savony ianao.
Ny fikambanan'ny fahasalamana dia manoro hevitra ny fisorohana ny fitsangatsanganana tsy ilaina any Shina na i Korea Atsimo.
Raha efa nandeha tany amin'ny firenena ianao ary voan'ny olona voan'ny aretina, dia tsy maintsy hojerenao mandritra ny 14 andro ho avy ianao raha misy fihan'ny soritr'aretina.
Mijanona ho tony ary miezaha hanaraka ny torolàlana hampihenana ny mety hisian'ny aretina.
March 10, 2020 Admin Blog Tsy asian-teny